१० वर्षपछि सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र सञ्चालनमा, निजीको भन्दा ५० प्रतिशत कममा उपचार – Health Post Nepal
२०७८ असोज १ गते १६:१९
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मुुख्य भवन छेउमा निर्माण गरिएको सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। लामो समयसम्म अलपत्र रहेको केन्द्रको भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो।
यससँगै नेपालका क्यान्सरका बिरामीले उपचारका लागि अन्य मुलुक जानुपर्ने बाध्यता घट्ने विश्वास गरिएको छ।
जनशक्ति तथा उपकरण अभावका बीच केन्द्रले केही सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। क्यान्सरका सबै सेवा–सुविधा सोही भवनबाट दिने योजनाका साथ काम अघि बढेको केन्द्रका संयोजक तथा क्यान्सर सर्जन प्रा.डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंहले जानकारी दिए।
उनका अनुसार केन्द्रबाट क्यान्सरका केमोथेरापी तथा रेडियोथेरापी एवं सर्जरी विधाका सेवा उपलब्ध हुनेछन्।
क्यान्सरको ओपिडी सेवा, क्यान्सर स्क्रिनिङ, डे–केयर केमोथेरापी सेवा र १० बेडमार्फत् इन पेसेन्ट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको केन्द्रले जनाएको ल्याएको छ। केन्द्रले महिलामा देखिने पाठेघरको मुखको तथा स्तन क्यान्सरका लागि स्क्रिनिङ कार्यक्रम सुरूसमेत गरिसकेको छ।
सुरूमा हप्ताको दुई दिन ३० देखि ६० बर्षसम्मका महिलाका लागि पाठेघर तथा स्तनको क्यान्सरको चेकजाँच हुने गरेको डा. यादवले जानकारी दिए।
‘क्यान्सरका बिरामी एकदमै ढिला आइपुग्ने हुन्छन्। तर, लक्षण नभइ जाँच गरेर क्यान्सर पत्ता लगाउन सकियो भने धेरै महिलाको ज्यान जोगाउन सकिन्छ,’ डा. यादवले भने।
केन्द्रले केही समयभित्र सम्पूर्ण सेवा–सुविधा दिने गरी विस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाएको जनाएको छ।
सबै सेवा सुचारू गर्न अझै एक बर्ष लाग्ने
२०६८ मंसिर २८ गते निर्माण सुरु गरी तीन वर्षभित्र केन्द्रको भवन निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको थियो। तर, बजेट निकासा, भूकम्प तथा कोभिडका कारण निर्माणमा ढिलाई भएको बताइएको छ।
अहिले रेडियोथेरापीको सेवा सञ्चालन गर्न पहल गरिएको केन्द्रले जनाएको छ। ‘रेडियोथेरापी सुरूवात गर्ने उपकरण तथा जनशक्ति पनि धेरै लाग्ने हुन्छ,’ डा. सिंहले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहयोग मागिरहेका छौं। केही समयभित्र सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएका छौं।’
उनले एक वर्षभित्र सबै सेवा सञ्चालन ल्याउने पनि बताए। ‘एक वर्षभित्र हामीकहाँ सबैजसो क्यान्सरको उपचार हुन्छ, दुर्लभ क्यान्सर र विकसित मुलुकमा प्रयोगमा ल्याइएको आधुनिक उपचार प्रणाली र औषधिबाहेक सबैजसो सेवा उपलब्ध छन्,’ डा. सिंहले भने। केही समयभित्रमै रेडियोथेरापीको एक मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।
उनले बजेट अभावकै कारण हाललाई सबै सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताए।
प्रा.डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंह
केही जनशक्ति आवश्यक पर्ने
हाल केन्द्र त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सञ्चालनमा रहेको छ। हाल भएका सेवा सञ्चालनका लागि पनि शिक्षण अस्पतालकै स्वास्थ्यकर्मी खटिएका छन्।
मेडिकल तथा सर्जरी चिकित्सक, स्टाफ नर्स पर्याप्त छन्। तर, रेडियोथेरापी सेवा सञ्चालन गर्नका लागि जनशक्ति आवश्यक पर्ने डा. सिंहले बताए।
‘रेडियोथेरापीका लागि तालिमप्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिन्छ। त्यसैगरी, टेक्निसियन, फिजिसियनलगायतका जनशक्ति आवश्यक पर्छ। अहिले यी जनशक्ति हामीसँग छैन। उपकरण थप गरेसँगै तथा जनशक्ति थप्छौं,’ उनले भने।
उपचारमा निजी भन्दा ५० प्रतिशत सस्तो
क्यान्सर रोगको उपचारमा नेपाल सक्षम र सवल भइसकेको दाबी नेपाली चिकित्सकले गर्दै आएका छन्। रक्त क्यान्सरको उपचारका लागि ‘बोनम्यारो’ प्रत्यारोपणको सेवा सरकारी अस्पतालमै सुरु भएको भएको छ।
र, स्वदेशकै उपचारले क्यान्सर रोगमाथि जित हासिल गर्नेहरु नभेटिएका पनि होइनन्। तर पनि यो रोगको उपचारका लागि भारतदेखि, सिंगापुर र अमेरिका धाउनेहरुको संख्यामा कमी आएको देखिँदैन।
अझै पनि रोगको पहिचान गर्न नसक्नु तथा नेपाली चिकित्सकमाथिको विश्वास कम हुँदा पनि बिरामीहरू विदेश धाइरहेका छन्।
तर, केन्द्रले बिरामीलाई विश्वास दिलाउनुका साथै रोग पहिचान गर्ने दक्ष जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्था गर्ने दावी गरेको छ।
क्यान्सरका कारण विदेशमा उपचारका क्रममा जीवनभरको कमाइमात्र नभई पूरै जायजेथा नै गुमाउनेहरु प्रशस्त छन्। नेपालमा पनि निजी क्षेत्रमा केही अस्पताल खुलेका छन्। तर, क्यान्सरको उपचार जटिल र मंहगो भएका कारण निम्न वर्गले सहज रुपमा उपचार पाउन असम्भव नै छ।
सरकारले क्यान्सर रोग पहिचान भएकाका लागि एक लाख सहयोग गर्ने गरेको छ। तर, यो रकम अपर्याप्त छ। केन्द्रले नेपालमा निजीस्तरमा खुलेका क्यान्सर सेन्टरको भन्दा लगभग ५० प्रतिशत कममा उपचार सेवा दिने दावीसमेत गरेको छ।
‘शिक्षण अस्पताल नेपालकै नुमना अस्पताल हो। सरकारी लेबलको क्यान्सर सेन्टर यही परिसरमा रहेर सेवा दिँदा धेरै हदसम्म विदेश जानेबाट रोक्छ। गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छ भन्ने विश्वास छ,’ डा. सिंह दावी गर्छन्।
‘सम्पूर्ण सहयोग सरकारी तहबाट भएपछि नागरिकलाई सस्तो दरमा सेवा उपलब्ध गराउछौं,’ उनी भन्छन्, ‘ निजीमा भन्दा ५० प्रतिशत कममा केन्द्रले सेवा दिन्छ।’
‘बोनम्यारो’ प्रत्यारोपण सुरू गर्दै
केन्द्रले ‘बोनम्यारो’ प्रत्यारोपण पनि छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा जुटेको छ। यससँगै रक्त क्यान्सरका बिरामीका लागि अत्यावश्यक मानिएको यो सेवा सरकारी अस्पतालमै सर्वसुलभ मूल्यमा प्राप्त हुने भएको छ।
सरकारी स्तरमा निजामति अस्पतालले ‘बोनम्यारो’ प्रत्यारोपण सुरू गरिसकेको छ। तर, नियमित रुपमा प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन।
कुन तलाबाट, कुन सेवा?
केन्द्रले सात वटा तलाबाट क्यान्सरका विभिन्न सेवा दिनेछ। जसका लागि १४२ बेडमार्फत् सेवा दिने योजना बनाइएको छ। डा. सिंहका अनुसार भवनको अन्डरग्राउन्डमा रेडियोथेरापीको सेटअप गरिएको छ। जसमा डे केयर केमोथेरापी, आउट पेसेन्ट क्लिनिक, स्क्रिनिङ क्लिनिक छन्। त्यसैगरी, पहिलो तलामा क्यान्सरको पहिचान गर्ने (इन्डोस्कोपी, मनोग्राम, अल्ट्रासाउन्ड, एक्स–रे तथा ल्याबको सुविधा हुनेछ।
दोस्रो, तेस्रो र चौथो तलामा इन्डोर वार्ड छ। जसमा मेडिकल तथा सर्जिकल वार्ड हुनेछ। त्यसैगरी, पाँचौं तलामा अप्रेशन कक्ष र १० बेडको आइसियू बेड छ।
छैटौं तलामा व्यवस्थापनको काम हुनेछ।
बिरामी आउने संख्या बढ्दो
केन्द्रले भदौं १ गतेदेखि सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। हाल आउट पेसेन्ट क्लिनिकमा दैनिक ३० जनाभन्दा बढीले सेवा लिएका छन्। त्यसैगरी, डे केयरमा सात र वार्डमार्फत् सात जना बिरामी भर्ना भएर सेवा लिइरहेका छन्।
नेपालमा पछिल्लो समयमा क्यान्सरको पहिचान गर्ने दक्ष जनशक्ति तथा उपकरणको पहुँचले बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। डा. सिंहका अनुसार सरकारले बार्षिक रूपमा क्यान्सर केन्द्र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसका कारणले निम्न वर्गका मानिसले निःशुल्क सेवा लिन सक्छन्।
सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र
2 thoughts on “१० वर्षपछि सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र सञ्चालनमा, निजीको भन्दा ५० प्रतिशत कममा उपचार”
Bishesh Poudyal says:
https://t.co/IUPZ3HF41tसरकारी स्तरमा निजामति अस्पतालले ‘बोनम्यारो’ प्रत्यारोपण सुरू गरिसकेको छ। तर, नियमित रुपमा प्रत्यारोपण हुन सकेको छैन रे ।।
उत्तर : हाम्रो प्रत्यारोपण नियमित रुपमा , महिनामा ३ देखि ४ जना सम्म , 2016 साल देखि आज सम्म १ दिन पनि रोकिएको छैन ।।